Aan Blitz: Sida aad noogu caawin karto in aan u keeno cuntooyin degdeg ah qaatayaasha
Aynu Blitz: Sida aad nooga caawin karto inaan u geyno raashin degdeg ah dadka qaata
Sannad kasta hareeraha Halloween, koox ka mid ah Cuntada on tabaruceyaasha Wheels ayaa isu yimaada si ay u xiraan kumanaan kun oo cunto ah oo deggan oo loogu talagalay dadka qaata cuntada. In kasta oo Cunnooyinka Lugaha la siiyaa keenista cunnooyin cusub, nafaqo leh maalin kasta, cuntooyinkan shelf-deggan ee loo yaqaan Blizzard Boxes waxaa loogu talagalay in lagu keydiyo sidaas darteed dhammaan dadka cuntada qaata waxay leeyihiin cunto degdeg ah marka qaboobaha Minnesota ay keento cimilada ugu daran
Intii lagu guda jiray Blizzard Box Blitz Arbacada, Oktoobar 28, Tabaruceyaasha Cunnada ee Wheels waxay xirxirayaan in ka badan 4,500 oo sanduuq ah oo ay ku jiraan laba cunto gabal. Tabaruceyaashu waxay si qandho leh uga shaqeeyaan khadka safka aroortii iyo galabtii iyo maalinta dhammaadkeeda, sanduuqyadu waxay diyaar u yihiin in loo qaybiyo Cuntooyinka ku yaal goobaha geynta Wheels ee aagga metro oo dhan.
Sannadkan, waxaan sidoo kale ka codsanaynaa caawimaad mutadawiciinteenna si aan sanaadiiqda uga soo qaadno goobta wax lagu raro ee ku taal Second Harvest Heartland ee Dooxada Dahabiga ah ee goobaha cuntada la geeyo. Waxaan raadineynaa xoogaa mutadawiciin ah oo geyn kara sanduuqyo inta lagu jiro maalinta Khamiista, Oktoobar 29.
Miyaad xiiseyneysaa fursaddan hal-tabaruca ah ee kaa caawin doonta keenista lakab dheeri ah oo ammaan ah oo loogu talagalay Cunnooyinka Cunnada-qaatayaasha xilliga qaboobaha? Kala xiriir Megan Callahan [email protected] ama 612-623-3363 si aad uqorto gaarsiinta!
Oktoobar 20, 2015